कतै तपाईँको भोट पनि समानुपातिकमा खेर त गएन? ~ RakhuOnline.com
Home › Unlabelled › कतै तपाईँको भोट पनि समानुपातिकमा खेर त गएन?
Dec 18, 2017Monday, December 18, 2017
कतै तपाईँको भोट पनि समानुपातिकमा खेर त गएन?
मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तपाईँले समानुपातिकतर्फ कुन चिह्नमा भोट हाल्नुभयो? हैन हैन, भन्नु पर्दैन। गोप्य मतदान हो, किन खोल्नुपर्‍यो र? तर तपाईँको भोट काम लाग्यो कि खेर गयो, त्यो त तपाईँले थाहा पाउनै पर्छ।
यो पटक देशभरबाट झण्डै १० लाख भोट खेर गएको छ। निर्वाचन आयोगमा आइतबार राखिएको तथ्याङ्कमा हिसाब गर्दा ठ्याक्कै ९ लाख ९६ हजार ९ सय ८५ भोट। यो बदर भएको भोटको संख्या हैन, सदर भएकैको संख्या हो। सदर भए पनि कसरी सदर भोटमा गणना भएन त यति धेरै भोट? आउनुस् बुझौँ विस्तृतमा।
आयोगको वेबसाइटमा कूल ९५ लाख ४४ हजार ७४४ सदर भोट गणना भएको तथ्याङ्क छ। अर्थात् यति भोट विभिन्न दललाई गएको छ।
तर, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार सिट बाँडफाँट गर्दा यो संख्यालाई सदर मत भने मानिएन। किनभने ऐनको दफा ६० को उपदफा १२ ले यसो भनेको छ-
कूल सदर मत गणना गर्दा तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्राप्त गरेको मत दलले प्राप्त गरेको कूल मतमा गणना गरिने छैन। तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दल ४४ वटा थिए। तीन प्रतिशत कटाउने दल ५ वटामात्र थिए।
नेपाली काँग्रेस 3128389
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल 472254
संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल 470201
यी दलले पाएको कूल मत ८५ लाख ४८ हजार ५९ लाई मात्रै कूल सदर मत मानेर गणना गरी यिनै दलहरुलाई मात्रै सिट बाँडफाँट गरियो।
यसको अर्थ विवेकशील साझाको तराजु र त्यसदेखि मुनि भएका सबै चुनाव चिह्नमा दिइएका मत खेर गयो। यी मुनिका सबै दल एउटै चुनाव चिह्नमा लडेको भए चौथो ठूलो दल भएर समानुपातिक सिट पनि जित्थ्यो।
१० लाख भोट यसरी खेर गयो। दुवै चरणमा गरी निर्वाचन आयोगले कूल एक करोड ५ लाख ८७ हजार ५२१ मत खसेको बताएको थियो। त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ झण्डै साढे १० लाख भोट बदर पनि भएको छ।
दुवै जोड्दा साढे २० लाख भोट खेर गएको छ।
तपाईँको भोट खेर गयो कि काम लाग्यो त?